Philippe Coutinho Ma Qorsheenayo In Uu Ka Tago Kooxda Barcelona
HomeHoryaalka SpainPhilippe Coutinho ma Qorsheenayo in uu ka tago Kooxda Barcelona
Wakiilka ciyaaryahanka reer Brazil ayaa sheegay in Philippe Coutinho uusan dooneynin inuu ka tago Barcelona inkastoo ay jiraan warar xan ah oo la xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo meel kale.
Ciyaaryahankii hore ee Liverpool – oo xilli ciyaareedkii hore amaah kula qaatay Bayern Munich – ayaa loo saadaaliyay inuu dib ugu laaban doono Premier League xagaagan oo dhan ka dib markii uu ku dhibtooday inuu boos fiican ka helo Camp Nou.
Inkastoo ku laabashadiisii ​​England ay ku fashilantay inay hirgasho, Coutinho ayaa mar kale isku arkay bartanka diirada, iyadoo wararka ka imanaya Italy ay sheegayaan in Juventus ay diyaar u tahay inay lasoo wareegto 28 jirkaan.
Si kastaba ha noqotee, wakiilka Coutinho Kia Joorabchian ayaa biyo qabow ku shubay rajada laga qabo inuu u dhaqaaqo, isagoo u sheegay Mundo Deportivo : “Ma aanan maqlin wax mana jirto wax qorshe ah oo aan uga soo dhaqaaqeyno Barça.
Inkasta oo uu dhaawac muruqa ah dhawaanahan soo gaadhay, Coutinho waxa uu ku riyaaqay inuu wax badan ka qabtay kooxda koowaad ee Camp Nou tan iyo markii uu qabtay Ronald Koeman , isagoo dhaliyay laba gool iyo laba caawin durba xilli ciyaareedkan.
Xiddiga reer Brazil ayaa sameeyay wadar ahaan 23 gool 84 kulan oo uu saftay tan iyo markii uu yimid Catalonia isagoo ka yimid Liverpool 2018, iyadoo Coutinho uu qandaraas kula jiray Barca ilaa 2023.